आरआरआर : विद्रोहको कथामा मित्रताको सेटअप – Dainik Sangalo
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र १२, २०७८ समय: १४:५१:४८
‘बाहुबली’को सिरिजबाट राम्रै चर्चा कमाएका निर्देशक एसएस राजामौलीको नयाँ सिनेमा ‘आरआरआर’ शुक्रबार रिलिज भयो ।
राजमौली निर्देशित भएकै कारण लामो समयदेखि प्रतीक्षित फिल्म आफैँमा चाहिँ कस्तो छ ? यो जिज्ञासा धेरैलाई थियो/छ । तीन घण्टा भन्दा लामो फिल्मले अहिले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ।
बाहुबलीको ह्याङ मेटाउन निर्देशक सफल भए कि भएनन् ? यो जिज्ञासा धेरैको देखिन्छ किनकि फिल्ममा निर्देशक राजामौली त छन् नै साथमा साउथ इन्डियन फिल्मका दुई स्टार जुनिएर एन्टीआर र राम चरण पनि भएकाले । पछिल्लो समय साउथमा एउटा हिरोलाई नै लिएर विशाल फिल्म बनाएको पाइन्छ । यद्यपि निर्देशक राजामौलीले दुई स्टारलाई एकसाथ पर्दामा ल्याए। जसका कारण फ्यान झनै उत्साहित बनेका छन्।
बाहुबलीको सिरिजपछि निर्देशक राजामौलीबाट दर्शकले ‘नेक्स्ट लेभल’ को फिल्म अपेक्षा गरे। यो स्वाभाविक पनि हो ।
फिल्मको कथा यस्तो छ
फिल्मले सन् १९२० को पृष्ठभूमिमा ब्रिटिसविरुद्ध लड्ने क्रान्तिकारीको कथा प्रस्तुत गर्छ । ब्रिटिशले एउटा गाउँ कब्जा गरेपछि गाउँले विद्रोही र ब्रिटिस राजमा सिपाही कसरी एक अर्काको साथी बन्छन् र ब्रिटिस विरुद्ध लड्छन् भन्ने फिल्मको मुख्य कथा हो । सामान्य र अन्य फिल्ममा समेत देखिएको कथामा निर्देशक राजामौलीको प्रस्तुतिले सिठ्ठी र ताली बजाउने प्रशस्त ठाउँ दिएका छन् ।
ब्रिटिस विरुद्ध विद्रोहको कथालाई निर्देशकले मित्रताको भावनात्मक सम्बन्धमा अगाडी बढाएका छन् । फिल्मको मूल कथासँगै सहायक रुपमा देखाइएको मित्रताको पटकथाले दर्शक बाधिन्छन् । विद्रोहको कथालाई निर्देशक राजामौलीले गरेको प्याकेजिङ, गज्जबका एक्सन दृश्य र सेट पिस तयार गरेकोले दर्शकले समय बिताएको पत्तै पाउँदैनन् ।
हिन्दी फिल्ममा डेब्यु गरेका जुनिएर एन्टीआर र दोस्रो पटक हिन्दी फिल्ममा देखिएका राम चरणको अभिनयले दर्शकलाई निराश बनाउँदैन । हिन्दी भाषामा यी अभिनेताले आफ्नो भूमिकालाई जीवन्त राख्न सफल भएका छन् । केमियो भूमिकामा अजय देवगन र छोटो भूमिकामा आलिया भट्टको उपस्थिति पनि बलियो छ ।
सन् १९२० को समय अनि भारतमा अंग्रेजको राज फिल्ममा देखाइएको छ । फिल्मको सुरुवातमै एक आदिवासी मल्लि नाम गरेकी बालिकाले ब्रिटिस अफिसर स्कोटकी पत्नी लेडी स्कोटकको नेल पेन्ट गर्दै गीत गुनगुनाउँदै गरेको दृश्य छ । लेडी स्कोटलाई मल्लिको कला मन परेपछि उनलाई त्यहाँबाट बन्धक बनाएर जबरजस्ती महल लगिन्छ । त्यहाँका रक्षक भीम (जुनिएर एन्टीआर) लाई उक्त बच्ची मल्लिलाई छोडाएर घर फर्काउने दायित्व आउँछ ।
वेन्कटा रामा राजु (अजय देवगन) ब्रिटिसविरुद्ध लडिरहेका छन् । आफ्नो छुटै सेना बनाइरहेका छन् । उनी ब्रिटिस विरुद्ध लडाई लड्न चाहन्छन तर उनिसँग हतियार हुँदैन । आफ्ना मान्छेलाई सैनिकको रुपमा तयार गरिरहेका वेन्कटाको बस्तीमा एक दिन अचानक हमला हुन्छ। व्रिटिशले गोली चलेको थाहा पाएपछि त्यहाँ अट्याक गरेका हुन्छन् । त्यहाँ वेन्कटाको पत्नी र छोरा मारिन्छन् तर रामा राजु जिउँदै हुन्छ। वेन्कटाको लडाई लड्ने सपना र हरेक योद्धालाई हतियार दिने वाचा रामा राजुको दायित्व बन्छ ।
राम चरण (अल्लुरी सीतारामा राजु) एक ब्रिटिस अफिसर हुन् । उनको आफ्नै उदेश्य छ । उनलाई अफिसरको माथिल्लो तहमा पुग्नु छ । यसको लागि उनी जे गर्न पनि तयार छन् । उनको इन्ट्रो सिनमै उनी स्ट्राइक गरिरहेका हजारौंको भिडमा एक्लै पुग्छन् र ब्रिटिस अफिसरले पक्राउ गर्नु भनेको आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्छन् । यद्यपि उनले आफूभन्दा माथिको अफिसरलाई रिझाउन सक्दैनन् र बढुवा हुँदैन ।
मल्लिलाई लिन उनका रक्षक आउने खबर थाहा पाएपछि ब्रिटिस अधिकारीहरूको एक भेलामा लेडी स्कोटले बढुवाको अफर सबैलाई दिन्छिन् । मल्लिलाई बचाउन आउनेको पहिचान पत्ता लगाएर उसलाई जिउँदै समात्ने काम त्यहाँ सुम्पिन्छ । आफ्नो उदेश्य प्राप्तिका लागि रामा राजु अगाडी बढ्छन् । हिन्दोस्तानी भएकै कारण उनी सजिलै इन्डिपेन्डेड एक्टिभिस्टहरुको वैठकमा पुग्छन् । त्यहाँ उनले आदिवासीका रक्षकसँग भेट्ने तारतम्य मिलाउँछन् । त्यहाँ भीमकै समूहका एक सदाय लक्षुसँग उनको भेट हुन्छ ।
यद्यपि लक्षुलाई रामा राजु ब्रिटिस पुलिस भएको थाहा भएपछि भाग्छन् र भीमकै सल्लाह अनुसार केही समय अन्डरग्राउण्ड हुने तय हुन्छ । त्यहीँ समयमा रेल्वेको दुर्घटनाका कारण खोलामा फसिरहेका एक युवालाई बचाउने दायित्व भीमलाई आउँछ । भीम झैँ उक्त बच्चालाई बचाउने तत्परता रामा राजुले पनि देखाउँछन् । त्यहीँ क्रममा भेट हुन्छ, भीम र रामा राजुको । यी दुईको त्यो भेट कतिबेला गहिरो मित्रतामा परिणत हुन्छ ? थाहै हुँदैन । यी दुई भाइ–भाइ बन्छन् ।
उदेश्य फरक हुन्छ । भीमलाई ब्रिटिसको महलमा पसेर आफ्नो मल्लिलाई घर फर्काउनु छ भने रामा राजुलाई भीमलाई पक्रिएर बढुवा लिनु छ तर यी दुई नै बेखबर छन् । किनकि एकअर्कासँग आफ्नो परिचय लुकाएका छन् । भीम एक मुसलमान अख्तर बनेका छन् भने रामा राजु सामान्य मान्छे । तर दुवै आफ्नो उदेश्यमा अडिग छन् ।
त्यहीँ बीचमा भेट हुन्छ, जेनिफरसँग । एक आदिवासीलाई ब्रिटिस अफिसरले दमन गरिरहदा त्यसो नगर्न भनदै अफिसरलाई रोकेकै कारण जेनिफर उर्फ जेनीले भीमको मन जितिसकेकी हुन्छिन् । यद्यपि उनलाई कसरी नजिकिने भन्ने आइडिया नै हुन्न । त्यहाँ सहयोग गर्छन्, रामा राजुले । उनले भीमलाई जेनीसँग नजिक बनाउन सहयोग गर्छन् । जसको मदतले भीम महल भित्र मात्र पुग्दैनन् । मल्लीलाई पनि भेट्छन् र घर फर्काउने वाचा गर्छन् तर उनको ठुलो रोकावट नै बन्न पुग्छन् रामा राजु ।
भीम समूहका सदस्य लक्षु पक्राउ परेपछि रामा राजुले समूहको बारेमा पत्ता लगाउने अनेक प्रयास गर्छन् । तर , सक्दैनन् । एक दिन लक्षुले रामा राजुलाई सर्प प्रहार गरेर घाइते बनाउँछन् । त्यो समयमा उनको ज्यान बचाउछन् भीमले । त्यहीँ बेला भीमनै आदिवासीको रक्षक रहेको सत्य रामा राजुले थाहा पाउँछन् । त्यसपछि हुन्छ दुई मित्रको युद्ध । ब्रिटिस महललाई तहसनहस बनाएर मल्लिलाई छुटाउनै लाग्दा रामा राजुले भीमलाई रोक्छन्।
मल्लिको ज्यानलाई खतरा भएपछि भीमले आत्मसमर्पण गर्छन् । त्यसपछि के हुन्छ ? यो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक नै हो। यसका लागि फिल्म हेर्न हलसम्मै पुग्नु पर्छ । कथा त ब्रिटिस ज्यादतीविरुद्ध विद्रोहको हो तर निर्देशक राजामौलीले यसलाई मित्रताको पटकथामा ढालेका छन् ।
फिल्मलाई स्वादिलो बनाउन उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । जुनिएर एन्टीआर र राम चरण आफैले हिन्दीमा स्वरांकन गरेका छन् । उनीहरुले हिन्दी भाषामै पनि आफ्नो पात्रालाई जीवित राख्न सफल भएका छन् । उनीहरुले बोल्ने संवाद र देखिने हाउँभाउ मिलेको छ । हिन्दी भाषामा न्याय गरेका छन् । फिल्मको सेट सिनेम्याटोग्राफी, भिएफएक्स, एक्सन लगायतका प्राविधिक पक्ष बलिया छन् ।
निर्देशकले १९२० को समय क्रियट त गरेका छन् नै । साथै , त्यसलाई जीवन्त पनि बनाएका छन् । फिल्मको सुरुवातबाटै देखाइने हरेक सिनलाई निर्देशकले जस्टिफाई गरेका छन् । यो उनको बलियो पक्ष हो । तीन घण्टा लामो फिल्म हेरिरहँदा उनले कुनै पनि सिनलाई खेर जान दिएका छैनन् ।
निर्देशक राजामौलीले फिल्मको पात्रालाई दर्शकसँग भावनात्मक रुपमा जोड्न सफल भएका छन् । पीडित र सामान्य मानिसको संघर्ष , मित्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइको कथालाई पस्किँदै गर्दा उनले सरल र सहज बाटो तय गरेका छन् । उनले दर्शकले सजिलै बुझ्ने किसिमको आफ्नो शैलीको पटकथा बुनेका छन् । जसले गर्दा सय वर्ष पुरानो कथा पनि रोचक ढङ्गले अगाडी बढ्छ ।
यद्यपि तीन घण्टाको समयमा केही दृश्य क्लिसे लाग्नु स्वाभाविक हो । सबै दृश्यमा उनले लजिक दिएका छैनन् । हिरो भन्नासाथ हाम्रो मानसपटलमा छाउने बलियो , चतुर र पोजेटिभ स्वभाव फिल्मका नायकमा पनि पाइन्छ ।
केके सेन्थिल कुमारको सिनेम्याटोग्राफी तारिफको हकदार छ । उनको सिन टेकिङ सुन्दरता थपेको छ । साबू सिरिलको प्रोडक्सन डिजाइनले सन् १९२० को समयमा दर्शकलाई पुर्याउन सफल भएको छ । केभी विज्येन्द्र प्रसादको कथालाई निर्देशक राजामौलीले पटकथामा ढालेका छन् भने डायलगमा साइ माधवसँग सहकार्य गरेका छन् । एमएम क्रीमको संगीतले फिल्ममा सुगन्ध थपेको छ ।
यो फिल्म निर्देशक राजामौलीको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट होइन । किनभने उनले एउटा झिँगालाई समेत हिरो बनाएर ‘मख्खी’ जस्तो फिल्म बनाएर आफ्नो क्रियटिभ माइन्डको बारेमा बताइसकेका छन् । बाहुबली जस्तो फिल्म मार्फत उनले साउथको फिल्मलाई विश्व बजारमा पुर्‍याई सकेका छन् । एक सय करोडमा बन्ने गरेको फिल्महरु अब साउथमा तीन सय करोडको हाराहारीमा बन्ने थालेका छन् ।
यसपटक निर्देशक राजामौलीले कथा त पुरानै रोजेका छन् तर प्रस्तुतीकरण नयाँ छ । उनले प्राविधिक रुपमा फिल्मलाई अब्बल बनाउने प्रयास गरेका छन् । बलिउडका फिल्ममा देखिसकिएको इन्डियनहरुको ब्रिटिस विरुद्धको विद्रोहलाई उनले यसपटक फरक प्रस्तुतीकरण मार्फत भनेका छन् । उनले आफ्नो कथा र पात्रलाई हलसम्म फिल्म हेर्न आउने दर्शकसँग जोड्न सफल भएका छन् । उनबाट मगाधिरा, मख्खी, बाहुबली जस्ता नयाँ कन्सेप्टका फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेका दर्शकलाई यसले केही खल्लो बनाउन सक्ला तर एउटा मनोरञ्जनात्मक फिल्म हेर्ने पर्खाइमा रहेका दर्शकलाई यसले निराश बनाउँदैन ।
फिल्म हेरिरहने दर्शकसँगै फिल्म कस्तो बन्ने गरेको छ ? भन्ने दर्शकलाई ‘आरआरआर’ हेर्न लायक फिल्म बनेको छ। किनकि यो प्राविधिक रुपमा बलियो भिजुअल ट्रीट हो। किनकि फिल्म लार्जर देन लाइफ छ । हिन्दी भाषी दर्शकका लागि यो एउटा अनुभव पनि हो। फिल्ममा कमजोरी नभएका होइनन् तर सबल पक्षले त्यसलाई ढाकेको छ । निर्देशक राजामौलीले यसपटक विषय पुरानै रोजेता पनि प्रस्तुतीकरण भने नयाँ छ ।
Last Updated on: March 26th, 2022 at 2:51 pm